စစ်တပ်မှာ အကြီးဆုံးကိုမှ သူရဲကောင်းဘွဲ့မပေးရင် ဘယ်သူ့ကိုသွားပေးရမလဲ | ZALEN
စစ်တပ်မှာ အကြီးဆုံးကိုမှ သူရဲကောင်းဘွဲ့မပေးရင် ဘယ်သူ့ကိုသွားပေးရမလဲ
January 10, 2020 December 5, 2018 by za len
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အား တီးတိန်(ဇိုမီး)အသင်း(ရန်ကုန်)နဲ့ ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး Rev. Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့ဝင်တွေက ဒီဇင်ဘာ(၄)ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ၊ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌လာရောက်တွေ့ဆုံ၍ သူရဲကောင်းအဖြစ်ဂုဏ်ပြုခြင်း (Gal Hang Pah Tawi Na Award)ပေးအပ်ခဲ့တယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Zalen Media နဲ့ တီးတိန်(ဇိုမီး)အသင်း(ရန်ကုန်)အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးကပ်ခင်းပေါင်နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး= Gal Hang Pah Tawi Na Award ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘာကြောင့် ဒီဟာကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ပေးခဲ့တာလဲ။
ဖြေ= Gal Hang Pah Tawi Na Award ဆိုတာ သူရဲကောင်းအဖြစ်ဂုဏ်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်။ သူက နိုင်ငံတော် စစ်တပ်မှာဆို အကြီးဆုံးလေ။ အဲ့ဒီအကြီးဆုံးကိုမှ သူရဲကောင်းမပေးရင် ဘယ်သူ့ကိုသွားပေးရမလဲဆိုတဲ့အသိလေးနဲ့ ပေးတာ။ သူက နိုင်ငံတော်ကို လုံခြုံအောင်ကာကွယ်ပေးတယ်။ အစစအရာရာမှာအရှေ့ကနေ ဦးဆောင်ပြီးရပ်တည်ပေးနေတာဆိုတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုချိန်မှာ ပြည်တွင်းပြည်ပကနေ ဖိအားတွေများတဲ့ချိန်မှာ ခရစ္စမတ်ချိန်မှာ ဖိအားသက်သာရာရအောင် ခရစ္စမတ် message သွားပို့ရင်းနဲ့ ဒီဆုကိုဂုဏ်ပြုတာပါ။
မေး= တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ တွေ့တဲ့ချိန်မှာ ဘာတွေပြောသွားလဲ။ အကိုတို့ကရော သူ့ဆီဘာတွေပြောလဲ။
ဖြေ= သူက ချင်းပြည်နယ်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လည်းလုပ်ချင်တယ်။ ရောက်လည်းရောက်ဖူးတယ်။ ဟားခါးမြေပြိုတုန်းက တစ်ခါနှစ်ခါရောက်ဖူးတယ်ပြောတယ်။ အခုလည်း မကြာခင်မှာ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ချင်းပြည်ကိုသွားပြီးတော့ ချင်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကို တိုးတက်အောင် တပ်မတော်အနေနဲ့ လုပ်ပေးနိုင်တာရှိရင် လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။
ကျနော်တို့လည်း ချင်းပြည်နယ်ဟာ လုံးဝနောက်ကျနေတာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးလည်းသိတယ်။ တခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းထက် ဦးစားပေးပြီးဆောင်ရွက်ပါဆိုတဲ့ဟာပါပဲ။ တပ်မတော်ရဲ့ အကူအညီလည်းလိုတယ်။
မေး= ဒီဆုကို ပေးဖို့ ဘယ်လိုစိတ်ကူးရခဲ့တာလဲ။
ဖြေ= ပထမတော့ ခရစ္စမတ် သတင်းကောင်းပြောဖို့ ဒုသမ္မတအိမ်ရော၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအိမ်ရော ခရစ္စမတ် message(သတင်းကောင်း)သွားပေးမယ်ဆိုပြီး အရင်လုပ်တာ။ အခွင့်ရတဲ့ချိန်မှာ လူကြီးအိမ်မှာ ဒီတိုင်းပဲလက်ဗလာနဲ့ သွားတာထက် တစ်ခုခုတော့လုပ်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့တိုင်ပင်ပြီးမှ လုပ်လိုက်တယ်။
မေး= တီးတိန်(ဇိုမီး)အသင်းက ဘယ်ဒေသအခြေစိုက်လဲ။
ဖြေ= တီးတိန်(ဇိုမီး)အသင်းဆိုတာ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ တီးတိန်မြို့နယ်အသင်းပါ။ ဒီအသင်းရှိလာခဲ့တာ အနှစ်(၂၀)ရှိပြီလေ။
မေး= တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကို ဆုပေးတဲ့ကိစ္စ အွန်လိုင်းမှာ ဆဲတာ၊ ဝေဖန်တာတွေ တွေ့ရတယ်။ ဘယ်လို တုန့်ပြန်ချင်တာလဲ။
ဖြေ= ကျနော်တို့ချင်းတွေကတော့ ခုချိန်မှာ အကောင်းမြင်တာထက် အဆိုးမြင်တာ ပိုများတယ်။ ချီးကျူးတာထက် ဝေဖန်တာပိုများပါတယ်။ နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ချင်းတွေ အမြင်က (၁၀)နှစ်လောက်နောက်ကျတယ်ဆိုတာ အစကတည်းက သဘောပေါက်ပြီးသား။ တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ဒီဟာရဲ့အကျိုးဆက်ကို ကျနော်တို့ ချင်းပြည်နယ်မှာ ခံစားလာမယ့်ခါမှာ သူတို့ပြန်ပြီးဝမ်းသာမှာပါ။ သူတို့ မဝေဖန်ရင် ဝမ်းနည်းရမလိုဖြစ်နေတယ်။
ရန်ကုန်မြို့က ပလက်ဝစစ်ဘေးရှောင် ၂၆ ဦး မူလနေရပ်သို့ပြန်
ကလေးမြို့တွင် သွားဘက်ဆိုင်ရာ အထူးကုအပါအဝင် ၂ ဦး ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့သေဆုံး
ဟားခါးမြို့တွင် လူငယ်စင်တာ တည်ဆောက်ဖို့ မြေနေရာကြည့်ရှု
CNF လက်နက်ကိုင်တွေ အစိုးရက ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးထိုးပေး၊ မပေး မသိရသေး
ရိခေါ်ဒါရ်မြို့တွင် ကိုဗစ်လူနာအားလုံးပြန်လည်သက်သာလာတာကြောင့် stay at home ပြန်လည်ဖြေလျော့
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့သူတွေပေါ် ဘယ်လို ဆေးအာနိသင်ပြတာလဲ
ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင် မနက်ဖြန် ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်မှာမဟုတ်သေး
ချင်းပြည်နယ်တွင် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကို ဒီလ (၂၇)ရက်ကနေ စတင်ထိုးနှံ့မယ်
တမူးမြို့တွင် (၁၄)ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်မှုဆက်လက်ဖြစ်ပွားပါက Stay at Home ကြေညာမယ်
ချင်းအဆိုတော် (၁၈)ဦးသီဆိုထားတဲ့ Chin United Album ကို ပလက်ဝစစ်ဘေးရှောင်ရန်ပုံငွေအတွက် အွန်လိုင်းကနေရောင်းချမယ်
© 2020 Zalen Media
Design & Developed by SalaiZingBawi.